हिलाम्य सडकमा मोटर सरर…नागरिकलाई सास्ती, स्मार्ट सिटीको हरिबिजोग ! (फोटो-कथा) – Artha Sarokar- Sudurpaschim Edition
हिलाम्य सडकमा मोटर सरर…नागरिकलाई सास्ती, स्मार्ट सिटीको हरिबिजोग ! (फोटो-कथा)
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा हिलाम्य सडकका कारण नागरिक समस्यामा परेका छन् । मुख्य बजारकै अधिकांश सडक क्षेत्रमा बर्खाको सयमा निर्माण सुरु भएको छ । समयमै काम सम्पन्न नहुँदा र असारे विकासको चटारोले प्राथामिकता पाउँदा सडकको अवस्था झनै बिग्रिदै गएको छ ।
स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला निर्माण थालिएका धनगढीका सडक जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदासम्म पनि उस्तै छन् । बिग्रिँदो सडकको अवस्थाले उपमहानगरपालिकाले देखेको स्मार्ट सिटीको सपनालाई जिस्काईरहेको छ भने आवतजावतमा कठिनाई समेत भएको छ । सडक निर्माणको गति सुस्त हुँदा झरीमा हिलाम्य र गर्मिमा धुलाम्य हुने सडकको अवस्थाका कारण धनगढीबासी सास्ति खेप्न बाध्य बनेका छन् । बाँकी फोटोमा हेर्नुहोस्ः